‘रगतले समाचार लेख्न तयार छु, विचलित हुन्न’ – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७६ बैशाख ४ गते बुधबार १२:०५ मा प्रकाशित
प्रेस काउन्सिल नेपालको लापरवाहीका कारण सोमबार ताण्डव न्यूज डटकमका सम्पादक अर्जुन गिरी पक्राउ परे । विपिन बताससँग सम्बन्धित एक समाचारलाई लिएर उनी विरुद्ध बतासले साइबर क्राइम अन्तर्गत मुद्धा दर्ता भएपछि गिरी पक्राउ परेका थिए । प्रेस काउन्सिल नेपालका एक कर्मचारीले उक्त अनलाइन काउन्सिलमा दर्ता नभएको भनी विपिन बतासका नाममा पत्र लेखिदिएपछि उनी विरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको थियो ।
तर उनको अनलाइन काउन्सिलमा दर्ता थियो । पछि काउन्सिलले माफी माग्दै आफ्ना कर्मचारीबाट गल्ती भएको स्वीकारेको छ । ताण्डव न्यूज डटकम दर्ता भएपनि आफ्ना कर्मचारीबाट गल्ती भएको भन्दै उसले क्षमा याचनासहित सीआइबीलाई पत्र लेखिसकेको छ । तर काउन्सिलले उक्त पत्र दिंदा उनी पक्राउ परिसकेका थिए र उनीविरुद्धको कानुनी प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो । उनीविरुद्ध मुद्धा परेपछि देशभर विरोध प्रदर्शन भएको छ।
अहिले उनलाई अदालतले ३ दिनको म्याद थपेको छ । स्वास्थ्यस्थितिका कारण उनी काठमाडौँको चिरायु अस्पतालमा हिरासतमा रहे । अस्पतालमै पुगेर उनीसँग यस प्रकरणमा केहि सोधेको छ । कुराकानीमा उनले आफु विचलित नहुनेसमेत बताएका छन् ।
१. स्वास्थ्यस्थिति के छ ?
पेट दुखेपछि अस्पताल लागिएको थियो । अहिले पुन: सीआइबी ल्याईएको छ । साथीभाईहरुको देशभरका धर्ना, विरोध र सहयोगले उत्साहित छु । अदालतले म्याद थप गरेको छ । सीआइबीसँग बयान सकियो । सरकारी वकिलकहाँ भोलि बयान हुने भनिएको छ ।
२. तपाईंको केसमा प्रेस काउन्सिलको गल्ती देखाइएको छ नि ? कुरा के हो ?
प्रेस काउन्सिलको लापरवाहीका कारण ममाथि मुद्धा लागेको हो । काउन्सिलकै सरहरु आएर आफ्नो गल्तीको प्रयास्चित पनि गर्नुभएको छ । कर्मचारीको त्रुटीले यस्तो भएको भनी माफी पनि माग्नुभएको छ ।
तर काउन्सिलको गल्तीका कारण मविरुद्ध मुद्धाको प्रक्रिया अगाडी बढीसकेपछि कानुनी लफडा जारी छ । तर साथीभाइले देशभर गरेको विरोध र काउन्सिलले आफ्नो गल्ती स्वीकारेपछि मेरो जित निश्चित भएकोमा म ढुक्क छु । तर काउन्सिलले अलि हेरिदिएको भए यो मुद्धा नै दर्ता हुने थिएन । उल्टै मलाइ फसाउने खालको पत्र लेखियो । जसका कारण विपिन बतासलाई बल पुग्यो । तर अव निस्केपछि कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने विषयमा सोचीरहेको छु ।
३. पत्रकार महासंघ र काउन्सिलका कर्मचारीबाट कस्तो सहयोग वा असहयोग भयो ?
दिनभर म चिन्तित भएँ । सबै कुरा सामान्य प्रक्रियामा चल्यो । महासंघ र काउन्सिलले खास काम गरेको जस्तो लागेन । तर हिजो महासंघकै साथीहरुको रोहवरमा म यहाँबाट निस्किएर साथीको घर गएको थिएँ । हिजो पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्ट, प्रेस चौतारी नेपालका उपाध्यक्ष गणेश पाण्डे, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ, र क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालका केन्द्रीय सदस्य कमल बुढा आउनुभएको थियो ।
आज प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव राजेश राइ र प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले दिनभर मलाइ छुटाउने प्रयास गर्नुभयाे । तर कानुनी प्रक्रियामा केस अगाडी बढेपछी भने अलिकति सकस भयाे । काउन्सिलकै अध्यक्षले प्रयास गर्दा पनि कुरा मिलेन । महासंघले अझैपनि प्रयास गरिरहेको छ ।
४. अहिले हिरासतको बसाइ कष्टपूर्ण त छैन नि ?
छैन । सहकर्मी बिजय लम्साल रातदिन लागिरहनुभएको छ । साथी सुरज प्याकुरेल सँगै हुनुहुन्छ । केहि परे उहाँहरुले गरिरहनुभएको छ । कानुनी प्रक्रिया अगाडी छिटो बढाउन उहाँहरु दौडीरहनुभएको छ । बाहिरका साथीहरुले पत्रकार पक्राउको विरोध गरेर सहयोग गरिरहनुभएको छ ।
पोखराका पत्रकारहरु धर्नामा हुनुहुन्छ । साथी सुरज र बिजयले सबै कुरामा अपडेट गराईरहनुभएको छ । त्यसैले बसाइ असहज छैन । तर समाचार लेखेकै आधारमा मेरो हातमा पहिलो पटक हतकडी लाग्यो । अपराधिको व्यवहार भयो । कोहि व्यापारीको उक्साहटमा प्रेस काउन्सिलकै लापरवाहीका कारण ममाथि मुद्धा चलाइयो । यो मेरो लागि मात्र होइन, समग्र पत्रकारिता जगतकै लागि दुखको कुरा हो ।
५. अव कसरी अगाडी बढ्ने सोच्नुभएको छ ?
मलाई गोली हानेर मारिदिएको भए बरु हुन्थ्यो । मेरो इमानमाथि जिस्काउने काम भयो । यसको मूल्य सम्बन्धित पक्षले चुकाउनै पर्छ । अव त कुरा मेरो मात्र होइन, समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको हो । यहाँबाट छुटेपछि बतासका थप कर्तुतहरुबारे लेख्नेछु । म अलिकति पनि विचलित छैन ।
अव त मलाइ देशभरका पत्रकारहरु र प्रेस काउन्सिलको पनि साथ र सहयोग छ । मलाई जसले फसाउन खोजे, तिनीहरुले पत्रकारिता के हो भन्ने कुरा अव बुझ्नेछन् । म अलिकति पनि विचलित छैन । विचलित हुन्न पनि ।
५. तपाईंको शुभचिन्तकहरुलाई केहि भन्न चाहानुहुन्छ ?
अहिले धेरै भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । तर ढुक्क हुनुस् म सम्मानका साथ निस्किंदैछु । मेरो गल्ती केहि छैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । गलत तरिकाले गलत मान्छेलाई पक्रने काम भयो भनेर प्रहरीहरुले पनि बुझिसक्नु भएको छ ।
यहाँबाट निस्केर झन् शशक्त भएर लाग्नेछु । ताण्डव अव साच्चैको ताण्डव हुनेछ । बरु रगतले समाचार लेख्न तयार छु, विचलित हुन्न । गुण्डा, भ्रष्टाचारीहरु विरुद्धसमाचार लेखिरहनेछु ।
उपचार खर्च तिर्न नसक्दा अस्पतालले चार महिने शिशुलाई बनायो बन्धक
विप्लवका दुई कार्यकर्ता गोरखाबाट पक्राउ